Finfinnee mootummaan abbaa-irree itti taphatu geetteerti yeroon Oromoon harka isaatti galfatu - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Finfinnee mootummaan abbaa-irree itti taphatu geetteerti yeroon Oromoon harka isaatti galfatu
Oromoo, kana booda gaddaa fi booyichatti xumura laatuuf yeroo gabaabaa sigaafata. Iddoo ganna 25'f hawwaa jiraatte gayuudhaaf kiiloomeetira muraasatu si hanqata.
Gootummaa durii isa abbootii fi akaakilee kiyya irraa dhagayeen alatti, gootummaan Oromoo inni guddichi kan ija kiyyaan argee ragaa baye isa bara kanaati. Gootummaan baranaa na boonse, saba koo akka abdadhu na taasise. Oromoon leenca ta’uu yoomuu caalatti akka amanuuf na dirqisiise. Oromoon, keessattuu dhaloonni kuni, goota. Goota jechuunuu gootummaa dhaloota kanaa haalaan waan ibsu natti hin fakkaatu.
Oromoo, kana booda gaddaa fi booyichatti xumura laatuuf yeroo gabaabaa sigaafata. Iddoo ganna 25’f hawwaa jiraatte (ijji kee irra buute fi onneen kee dharraate) gayuudhaaf kiiloomeetira muraasatu si hanqata. Kan godhuu qabnu, kana booda, hafuura qabannee, obsa godhannee imala eegalle itti fufuu qofa. Tabba bayuuf yeroo wanti xiqqoon nu hafetti wanti duubatti mucucannuuf tokko hin jiru. Gatiin guddaan kaffalameeti kan as gayame, yadadhaa.
Sochii baatii saddeetiif godhameen rasaasa takka osoo hin dhukaasne Oromoon diina hollachiise, eennummaa isaa hundatti agarsiise. Dhiiroo bilisummaan hanga nuti eegnuu olitti kaluu jirtii beekaa. Bifa eegalleen, ciniinnannee, yoo hammaatte haafas taatu qabannee, qabsoo eegalle itti fufne taanaan umriin gabrummaa baatii muraasatti gadi akka deebitu hin maminaa. Tuniisiyaa, Masrii fi Liibiyatti ummanni woggaa hedduuf qabsaayee miti abbootii-irree woggoottan hedduuf ummata irratti siidaa ijaaratan kan garagalche.
Mootummaan Woyyaanee abbaa-irree nuti beeknu heddu irra garaa-jabaataa fi balleessee baduuf kutattaadha. Wanti beekuu qabnu garuu, Gaafa Afrikaatti, hidhannee-dhabaannee, humni humna Oromoo gitu, nuti nu gaye jennee kaanaan kan irreen nu bitu tokko hin jiraatu. Osoo akka ajjeechaa, sodachisaa fi hidhaa Woyyaaneetii Oromoon dur jilbiifate. Humni Woyyaaneen hin bobbafne, wanti isiin olkaayatte, tokko hin jiru. Kana boodas wanti isiin gadi fuutu tokko hin jiraatu.
Yoo haalli hayyame gugataa, yoo dubbiin jabaatte xurree addaddaan tirataa gara Finfinneetti imaluu qabna. Finfinnee mootummaan abbaa-irree itti taphatu getteerti yeroon Oromoon harka isaatti galfatu.
Gufuun heddus yoo nu mudate, gatii fedhes yoo nu gaafate, ciminaan hojjannee, harkas wolqabannee, hiriira boruu hiriira dhumni Woyyaanee kalaayuu ifatti addunyaa hundatti argisiisu godhuu qabna. Kuni kan ta’u hirmaannaa hunda keennaatiin.
hiriira mormii sanbataa
Previous articleHiriirri mormii guddaan guutuu Oromiyaa keessatti Sanbata dhufu geggeeffamuuf
Next articleHiriirri Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti geggeeffamaa jiru mootummaa Itoophiyaatti qormaata cimaa ta’eera jetti Ameerikaan